Ka anyị chịtụ ọchị! | KONGOLISOLO
Onye ọ bụla na-eji iko onwe ha enyocha ihe. nwere oge iji lelee ihe ọbụladị nkeji abụọ, ị gaghị ada n’onwe gị ịchọpụta ihe ha kpughere n’onwe gị gbasara onwe ha: kedu ihe bụ isi ma bụrụkwa ihe jikọrọ ọnụ ọgụgụ abụọ a na onyoonyo?
Site na: KongoLisolona: July 14, 2020 12: 37 Enweghị asịsa
O nwere ike doo anya ndị na-a payaghị ntị, mana maka onye ọ bụla na-ekiri ihe na-eme, ọ ga-achọpụta na ọ bụ "Mouth". Na nkịta na maka nwoke, ndị…	GỤKWUO
Ikike icheta: Koffi Olomidé na Fàbregas; ọ bụ otu n'ime mmebi ezumike ndị enwere ebe ahụ Olee egwuregwu ndị egwu abụọ a na-egwu? Ndi egwu anyi o chefuru na anyi no n’Afrika? Kedụ ka Koffi Olomidé na Fàbregas si kwere ka a see ha foto n'ụzọ a?
Site na: KongoLisolona: July 14, 2020 05: 28 Enweghị asịsa
Kedu ọnọdụ nke ahụ bụ? Kedu ihe ụzọ a maka Koffi jide onye na-egwu egwu na-eto eto pụtara? Koffi Olomidé, n ’ụlọ n’ụlọ, na-atụkọ ụtọ onye na-agụ egwú Fàbregas. Ha bụ kọ ...	GỤKWUO
Chọpụta ọgwụ pụrụ iche maka ọgwụgwọ ụmụ nwanyị ndị ọkacha mara ọhụrụ bidoro n’ahịa; kwuru na ọgwụ bụ naanị maka ndị okenye; ọzọ nchegbu maka ụmụ nwanyị
Site na: KongoLisolona: July 13, 2020 11: 05 Enweghị asịsa
Aha ngwaahịa: "Nwoke". Ngosipụta: A na-atụ aro nwoke maka ụmụ nwanyị niile. Mmadu dikwa ire n ’onodu ndi a“ nke nkụda mmụọ, nchegbu,…	GỤKWUO
Site na: KongoLisolona: July 10, 2020 14: 51 Enweghị asịsa
Afụ ọnụ: dịka aha nwanyị, n'ụdị pụrụ iche, "Bụ usoro nke ntutu na-eto n'elu elu egbugbere ọnụ nke ụmụ nwoke". Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ekwu: ọ malitere inwe ...	GỤKWUO